Songandina Archives - Page 736 sur 1062 -
Tonga any Ambilobe : Notsenaina tamin’ny fomba mendrika ny nofo mangatsiakan’ny filoha Zafy Albert
20/10/2017 admintriatra 0
Tafaverina an-tanindrazana. Rehefa avy namakivaky ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-6, tonga omaly tany Ambilobe, tanindrazany, ny nofo mangatsiakan’ny filoha telo aloha, ny profesora Zafy Albert. Vahoaka marobe no efa niandry ny fahatongavan’ny tranovorona voarakotry ny …Tohiny
PESTA : Hanamafy ny fifehezana azy ny Croix Rouge
Noraisin’ ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta tetsy amin’ ny lapam-panjakana tetsy Mahazoarivo omaly ny sekretera jeneralin’ny federasionin’ny croix rouge Elhadj As Sy, manoloana izao ady atao amin’ny pesta izao. Nambaran’ ny praiminisitra nandritra ny fihaonana …Tohiny
Fanakatonana ny Tiko AAA : Miezaka ny manadio tena Ravalomanana
Tsy miova amin’ny fomba fanaony. Izay no azo ilazana ny Filoha teo aloha sady mpanorina ny orinasa Tiko, Marc Ravalomanana. Taorian’ny fanakatonana ny orinasa Tiko AAA ao Andranomanelatra mantsy, noho ny trosa misavovona, izay tamin’ny …Tohiny
Emmanuel Macron : Nitondra teny fampiononana noho ny fahalasanan’ny profesora Zafy
Nandefa taratasy fampiononana sy fiaraha-miory ho an’ ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina amin’ny alalan’ ny vahoaka malagasy rehetra ny filoha frantsay Emmanuel Macron, noho ny fodiamandrin’ ny filoha teo aloha, ny profesora Zafy Albert. Nambaran’ny …Tohiny
« 1 … 734 735 736 737 738 … 1 062 »